Canonical inodonhedza rutsigiro rwe 32-bit zvivakwa mukuburitswa mune ramangwana | Linux Vakapindwa muropa
Canonical inodonhedza rutsigiro rwe 32-bit zvivakwa mukuburitswa mune ramangwana
Canonical yakazivisa nhasi kuti yazopedzisira yasarudza bvisa zvachose rutsigiro rwe 32-bit kuvaka mune inotevera kuburitswa kwayo kwakakurumbira Ubuntu kugovera.
Gore rakapera, panguva yeUbuntu 18.04 LTS Bionic Beaver yekuvandudza kutenderera, Canonical yakazivisa kuti vaizomira kupa 32-bit kuisa mifananidzo, chiito chakateedzerwa neshanduro dzese dzeUbuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish. Asi, iyo 32-bit zvinyorwa zvaive zvichiripo.
Nekuti Ubuntu 18.04 ndeyekusununguka-kutsigirwa kuburitswa, kugamuchira zvigadziriso zvemakore mashanu, Canonical yakaremara kugona kukwidziridza kubva kuUbuntu 18.04 LTS kuenda kuUbuntu 18.10 ye32-bit masisitimu, asi ikozvino, vazivisa izvozvo Kutanga naUbuntu 19.10 Eoan Ermine, 32-bit rutsigiro ichabviswa zvachose.
32-bit zvinoshandiswa zvichakwanisa kumhanya paUbuntu
Kunyangwe Canonical isingachapi rutsigiro rwe32-bit zvirongwa zvekuburitswa kwavo kuri kuuya, kambani yakataura kuti zvicharamba zvichikwanisika kumhanyisa 32-bit kunyorera kuUbuntu kana vashandisi vachida izvozvo. Izvi zvinogona kuzadzikiswa kana vagadziri vakashandisa inotsigirwa faira sisitimu senge Snap, Flatpak, kana AppImage.
Canonical akataurawo izvozvo rumwe ruzivo nezve kupera kwekutsigirwa kwe32-bit zvivakwa zvichapihwa mumwedzi inotevera apo Ubuntu 19.10 yave padyo nekusunungurwa kwayo kwekupedzisira, izvi ndezvekuti 32-bit vashandisi vekushandisa vazive maitiro. Ubuntu 19.10 Eoan Ermine ine zuva rakarongwa rekuburitsa musi waGumiguru 17, 2019.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Canonical inodonhedza rutsigiro rwe 32-bit zvivakwa mukuburitswa mune ramangwana
Slimbook PRO X: svika pakuziva yakanakisa Linux laptop zvakadzama